Iindaba - Ungakhetha njani ubukhulu bocingo lwenkukhu?
Ucingo lwenkukhu luneegeyiji ezahlukeneyo.I-Guage ithetha ubukhulu bocingo hayi ubukhulu bomngxuma.Okukhona usezantsi igeyiji, kokukhona ucingo lujiyile.Umzekelo, i-19 geji yocingo, ucingo lunokuba malunga ne-1mm ubukhulu.Kungenjalo unokubona i22 yocingo lweGauge, olunokuba malunga ne-0.7mm ubukhulu.
Ubungakanani beminatha yomnatha wocingo olunesiqingatha buthetha ubungakanani bomngxuma ukusuka kubukhulu obuyi-22mm ukuya kumancinci kakhulu kwi-5mm.Nceda ukhethe ubungakanani buxhomekeke kwizilwanyana onqwenela ukuzigcina ngaphakathi okanye ngaphandle kwendawo.Umzekelo, ukuba ufuna ukugcina iimpuku kunye nezinye iimpuku ekubalekeni kwenkukhu kufuneka ukhethe malunga ne-5mm.
Ucingo lwenkukhu nalo luza ngobude obahlukeneyo, sikholisa ukubiza oku ububanzi.Ubude obufunekayo buxhomekeke kubukhulu besilwanyana .Ukuba ufuna ukusebenzisa i-0.9m ububanzi, kodwa unokufumana kuphela i-hexagonal wire mesh efana ne-1m.
Siziingcali kucingo lwenkukhu, ukuba awuyazi indlela yokukhetha umnatha wocingo onehexagonal kwimfuno yakho.Pleandicela ingcebiso kuthi.